Knowledge – FunInsights
မြင်တွေ့ဖို့ခက်ခဲလွန်းလှတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရာများ – ပုံ(၂၀)
Knowledge / By Mario
ကမ္ဘာကြီးဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အရာတွေနဲ့ ပြည့်နက်လို့နေပါတယ်။ ဥပမာ အဖို၊ အမ တစ်ပိုင်းစီဖြစ်နေတဲ့လိပ်ပြာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ငါး နဲ့ ကမ်းခြေကသဲတွေကို အဆပေါင်းများစွာချဲ့ပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အမြင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲနေတာမျိုးတွေလိုပေါ့။ အောက်ဘက်မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ မြင်တွေ့ဖို့ခက်ခဲလွန်းလှတဲ့အရာတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Maui ကမ်းခြေမှသဲကို အဆပေါင်း ၁၀၀ မှ ၃၀၀ အထိချဲ့ပြီး တွေ့မြင်ရသောမြင်ကွင်း ၂။ အဖိုတစ်ခြမ်း အမတစ်ခြမ်း Bilateral Gynandromorph လိပ်ပြာ ၃။ အရောင်နှစ်မျိုးနဲ့ နေကြာပန်း ၄။ ပုရွက်ဆိတ်ရဲ့ခေါင်းကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်လိုက်သောအခါ တွေ့မြင်ရသောမြင်ကွင်း ၅။ လိပ်တစ်ကောင်ရဲ့ အရိုးတည်ဆောက်ပုံ ၆။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း(၁၄၀)ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒိုင်နိုဆောအရိုး ၇။ နော်ဝေးနိုင်ငံ Kongsfjorden အနီး ရေအောက်ထဲမှာ တွေ့မြင်ရသော …
မြင်တွေ့ဖို့ခက်ခဲလွန်းလှတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရာများ – ပုံ(၂၀) Read More »
သင်ထင်ထားတာထက် ပိုမိုကြီးမားနေတဲ့အရာဝတ္ထုများကို နှိုင်းယှဥ်ပြထားသောဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အချို့သောကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို ဓာတ်ပုံထဲမှာသာ မြင်တွေ့ဖူးကြပြီး လက်တွေ့မှာ ထိုအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အရွယ်အစားတွေဟာ မည်မျှကြီးမားတယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထိုကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ယှဥ်တွဲပြီး အတူတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ မည်မျှကြီးမားတယ်ဆိုတာကို သိရှိနားလည်သွားကြမှာပါ။ အောက်ဘက်မှာတော့ ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို အခြားအရာတစ်ခုခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရုပ်ထု Statue of Unity ကို လူတွေနဲ့တွေ့ရပုံ ၂။ ပင်လယ်လိပ်ကို လူတစ်ဦးနှင့်အတူတွေ့မြင်ရပုံ ၃။ အာဖရိကခရု ၄။ မြင်းရဲ့အဆုပ်ကို လေထိုးသွင်းထားပုံ ၅။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပိရမစ် The Great Pyramid Of Giza ကို လူတစ်ဦးနှင့်အတူတွေ့ရပုံ ၆။ နေရဲ့အရွယ်အစားဟာ ကမ္ဘာကြီးအလုံးရေ မည်မျှဆန့်သလဲဆိုတာ သရုပ်ဖော်ပြထားပုံ ၇။ ဗို့အား(၄)သိန်းရှိတဲ့ မြေအောက်ကေဘယ်ကြိုးရဲ့ အရွယ်အစား …
သင်ထင်ထားတာထက် ပိုမိုကြီးမားနေတဲ့အရာဝတ္ထုများကို နှိုင်းယှဥ်ပြထားသောဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ Read More »
ထူးခြားတဲ့အရောင်အသွေးတွေရှိနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံများ – ( ၂၅ ) ပုံ
ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အရောင်တွေရှိနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံများကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ reddit က group တစ်ခုမှာ သာမန်မဟုတ်ဘဲ ထူးခြားနေတဲ့အရောင်အသွေးရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို မျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ မြင်တွေ့ခက်လှတဲ့ အဖြူရောင်သစ်ကုလားအုပ် ၊ အနက်ရောင်သမင်၊ ရွှေရောင်ကြွက် စတဲ့ တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့။ အောက်ဘက်မှာတော့ reddit က group တစ်ခုမှာမျှဝေထားကြတဲ့ ထူးခြားတဲ့အရောင်တွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကတ္တဝါ ၂။ ရွှေရောင်ကြွက် ၃။ ၄။ အသည်းပုံတွေနဲ့ကြက် ၅။ အနက်ရောင်လိပ် ၆။ အရောင်တစ်ခြမ်းစီရှိတဲ့ကြောင် ၇။ အရောင်နှစ်မျိုးနဲ့ဒေါင်း ၈။ Possum (သစ်ပင်နေ သားပိုက်ကောင်ငယ်တစ်မျိုး) ၉။ သက်တန့်ရောင်ရှိတဲ့ငမန်း ၁၀။ အဖြူရောင်သစ်ကုလားအုပ် ၁၁။ ရွှေရောင်နွားချေးပိုး ၁၂။ …
ထူးခြားတဲ့အရောင်အသွေးတွေရှိနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံများ – ( ၂၅ ) ပုံ Read More »
သင်မြင်ဖူးမှာမဟုတ်သေးတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်းတဲ့ ရှုခင်းဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ
Knowledge, Nature, Photography / By Mario
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာများနဲ့ အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာများဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အံ့သြစရာကောင်းလှတဲ့ သဘာဝရှူခင်းတွေနဲ့ နေရာဒေသအသစ်ကို ပိုမိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလာနိုင်ကြပါတယ်။ မတူညီတဲ့နေရာဒေသ ရသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေတောင် လှပလွန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပန်းရောင်ရေကန်၊ လှပလွန်းတဲ့ Lavender နဲ့ Tulip ပန်းခင်းတွေနဲ့ အခြားကမ္ဘာတစ်လွှားမှ လှပလွန်းတဲ့ရှူခင်းတွေဟာ အမှန်တကယ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာ သင့်အနေနဲ့ ယုံကြည်ဖို့တောင် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ လှပလွန်းတဲ့ရှူခင်းဓာတ်ပုံများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ နယ်သာလန်က Tulip ပန်းခင်း ၂။ Alaska က Mendenhall ရေခဲဂူ ၃။ အမေရိကန်နိုင်ငံက Fly Geyser ၄။ အမေရိကန်နိုင်ငံက Antelope တောင်ကြား ၅။ တရုတ်နိုင်ငံက လက်ဖက်ခင်း ၆။ ဂျပန်နိုင်ငံက Wisteria ပန်းပင်ကြီး ၇။ ဂျပန်နိုင်ငံက …
သင်မြင်ဖူးမှာမဟုတ်သေးတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်းတဲ့ ရှုခင်းဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ Read More »
သင့်ကို အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ လှပလွန်းတဲ့ ရှုခင်းဓာတ်ပုံများ – ပုံ(၂၀)
၁။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Seattle မှာရှိတဲ့ တိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ Rainier တောင် ၂။ ရုရှားနိုင်ငံက စွန့်ပစ်ဆားတွင်းတစ်ခု ၃။ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံက မျက်လုံးပုံစံဂူ ၄။ Namib သဲကန္တာရနဲ့ ပင်လယ်ဆုံတွေ့တဲ့နေရာ ၅။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကြည်လင်နေတဲ့ Verzasca မြစ်ရေ ၆။ Sardinia ကျွန်းက လှပတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု ၇။ ရုရှားနိုင်ငံက Saint Basil’s Cathedral ၈။ အီရန်နိုင်ငံက Damavand တောင်ပေါ်မှာ တိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မြင်ကွင်း ၉။ ကုလားအုပ်တွေရဲ့ အရိပ် ၁၀။ ဖီဂျီနိုင်ငံက ကြည်လင်လွန်းတဲ့ရေကြောင့် လေပေါ်မြောက်နေသလားထင်ရတဲ့ လှေတစ်စင်းရဲ့မြင်ကွင်း ၁၁။ နော်ဝေးနိုင်ငံ Svalbard မှာရှိတဲ့ရေခဲမြစ်ကနေ ကျဆင်းလာတဲ့ရေတံခွန် ၁၂။ အမေရိကန်နိုင်ငံ South Dakota မှာတွေ့ရတဲ့ မိုးကြိုးမုန်တိုင်း …
သင့်ကို အံ့အားသင့်သွားစေမယ့် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ လှပလွန်းတဲ့ ရှုခင်းဓာတ်ပုံများ – ပုံ(၂၀) Read More »
ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဘာကြောင့်ဦးထုပ်ဆောင်းသင့်လဲဆိုတာ ပြောပြနေတဲ့ဓာတ်ပုံများ – ပုံ(၂၀)
ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုင်ကယ်စီးသူဦးရေဟာ အရမ်းများပြားလှပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဟာမြန်မာပြည်က မြို့နယ် အတော်များများမှာ အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်တစ်မျိုးအဖြစ်ရှိနေခဲ့တာလဲ အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဆိုင်ကယ်စမောင်းပြီဆိုတာနဲ့ အဓိက တွဲဖက်ပါဝင်ရမဲ့အရာကတော့ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှအဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ဦးခေါင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကို မဖြစ်မနေဆောင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ဦးထုပ်ဆောင်းရင် ဆံပင်ပုံစံပျက်သွားမှာစိုးလို့ တစ်ချို့က မိမိရဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာဘာညာအနေအထားပျက်သွားမှာစိုးလို့ မဆောင်းကြသလို တစ်ချို့ကလဲ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ဝယ်ကိုမဝယ်ထားတာတွေလဲရှိနေပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဆံပင်ပုံစံပျက်သွားတာကပြသနာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်က တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့်ရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ကောင်း ကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုဖေါ်ပြပေးမှာကတော့ ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဘာကြောင့် ဦးထုပ်ဆောင်းသင့်လဲဆိုတာ ပြောပြနေတဲ့ ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။ ၉။ ၁၀။ ၁၁။ ၁၂။ ၁၃။ …
ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဘာကြောင့်ဦးထုပ်ဆောင်းသင့်လဲဆိုတာ ပြောပြနေတဲ့ဓာတ်ပုံများ – ပုံ(၂၀) Read More »
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအဆောက်အဦးများ – (၃၅)ပုံ
၁။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ‌Polygone Riviera ရှော့ပင်းစင်တာ ၂။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ Mahanakhon Tower ၃။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Ferrari World ၄။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Hollywood မှာရှိတဲ့ Pacific Design Center အဆောက်အဦး ၅။ တာမင်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မင်္ဂလာခန်းမကြီး ၆။ တရုတ်နိုင်ငံ Chongqing Shi မှာရှိတဲ့ အနုပညာပြတိုက် ၇။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Geisel စာကြည့်တိုက် ၈။ ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မှာရှိတဲ့ အာကာသပြတိုက် ၉။ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာစင်တာ ၁၀။ ကူဝိတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Al Tijaria Tower ၁၁။ သြစတီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာ မှာရှိတဲ့ Dc Tower …
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအဆောက်အဦးများ – (၃၅)ပုံ Read More »
နှစ်ပေါင်း(၁၄၄)နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက လှပလွန်းတဲ့သစ်ပင်ကြီး
Knowledge / By Thuriya
ဒီလှပလွန်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာ Wisteria အမျိုးအစားနွယ်ပင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Wisteria နွယ်ပင်တွေထဲမှာ အကြီးဆုံးသစ်ပင်ကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသစ်ပင်ကြီးဟာ (၁၉၉၀)စတုရန်းမီတာရှိပြီး ၁၈၇၀ခုနှစ်ကတည်းက ဂျပန်နိုင်ငံ Ashigawa ပန်းဥယျာဥ်ထဲမှာ တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Wisteria နွယ်ပင်ကြီးဟာ ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် စတီးသံတိုင်တွေကို အထောက်အကူအဖြစ် ထားရှိပါတယ်။ လာရောက်လည်ပတ်သူများအနေနဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေကို ပန်းရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင်မီးများထိုးကာ အလှဆင်ထားတာကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာတော့ ဒီအပင်ကြီးရဲ့ အလှဓာတ်ပုံတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Image Credit – y-fu Image Credit – tungnam.com.hk Image Credit – Mamiko Irie Image Credit – P-Zilla Image Credit …
နှစ်ပေါင်း(၁၄၄)နှစ်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက လှပလွန်းတဲ့သစ်ပင်ကြီး Read More »
What’s talking about Ayurvedic medicine and insomnia?
The audience will be introduced to Ayurvedic medicine and insomnia, as discussed by the professor. Insomnia is caused by not getting enough sleep. Usually, sleep patterns vary with age. Atayoung age, between six and eight hours of sleep is sufficient. As you grow older, your Vata dosha may become more and more sleepy. …
What’s talking about Ayurvedic medicine and insomnia? Read More »
Dogwood is also useful in such areas
Now, I would like to introduce to the audience that dogwood is useful in such places as well. Dogwood isaplant that grows naturally in many parts of Myanmar. It isawind-spreading species and hasavery high germination rate, so you can see large trees about the size ofahuman in …
Dogwood is also useful in such areas Read More »
Online Shop မှာ ရောင်းချဖို့ ယောကျ်ားကို photo model လုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
နာမည်‌ကျော်ပန်းချီကားတွေထဲက အတိုင်းရယ်စရာကောင်းအောင်ပုံစံတူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသူများ – ပုံ(၂၀)
မိမိရိုက်ပေးထားတဲ့ပုံနဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက ပြန်ရိုက်ပေးသောဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ
ဓာတ်ပုံဆရာ Paul Buscato ရဲ့ အချိန်ကိုက်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများ – (၂၅)ပုံ
သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးနောက် အလွန်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းများ – (၂၅)ပုံ
Copyright © 2021 FunInsights | Powered by Astra WordPress Theme